Al-Shabaab oo lagu ceebeeyay weerar uu soo qaaday
Xubno ka tirsan ururka nabad-diidka ah ee al-Shabaab waxay dhawaan weerar ku soo qaadeen magaalada Marka taasoo dhawaan laga xoreeyay dhibaatooyinka ururka ku hayay dadweynaha Soomaaliyeed. Hasa ahaatee, ururka ayaa ku fashilmay weerarkaas maaddaama ciidammada Soomaaliyeed ay ka war hayeen weerarkaas iyadoo ay diyaar u ahaayeen inay burburiyaan ururka. Saddex ka mid ahaa nabad-diidka ayaa lagu dilay dagaalkaas.
Dadweynaha Soomaaliyeed ayaa horay u sii sheegay ciidammada in ururka uu qorsheynayay inuu weerar ku qaadoo magaalada. Qaar ka mid ah ururka nabad-diidka al-Shabaab ayaa billaabeen in si aan kala qaad laheyn ay u xabbadeeyaan dadweynaha ku dhaqan magaalada. Mas’uuliyiinta amniga ayaa sheegay in horayba u ogaayeen in weerarkaas dhici doono waxayna u mahad celiyeen dadweynaha Soomaaliyeed ee xogta ku aaddan weerarkaas bixiyeen, waxayna ammaaneen geesinimada ciidammada ee difaacay sharafta dadka Soomaaliyeed ee iska celiyay cadowga.
Weerarkaan wuxuu dhacay hal maalin ka dib markii ciidamo boliis ah oo dheeri ah la geeyay magaaldaas si ay u xoojiyaan amniga magaalada si dabeetana dadweynaha Soomaaliyeed ugu noolaadaan nolol amni leh. Ururka nabad-diidka ah ee al-Shabaab waxaa laga saaray dhammaan magaalooyinkii ugu waaweynaa ee uu hadda ka hor ka talin jiray wuxuuna kusoo haray oo keliya tuulooyin faro-ku-tiris ah, haatanna wuxuu awood u leeyahay oo keliya inuu dadweynaha aan waxba galabsan qaraxyo la beegsado.
Xorriyo 2 Views : 183
Xorriyo 1 Views : 9961